Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Ciidamada Xabashida Itoobiya. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Ciidamada Xabashida Itoobiya.
Wararka ka imaanaya degmada Halgan ee gobalka Hiiraan ayaa sheegaya in habeenkii xalay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin tiro madaafiic ah ku garaaceen difaacyada ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen degmadaasi.
Dhawaaqa madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada iyo sidoo kale deegaanada dhaca wadada laamiga ah ee isku xirta degmooyinka Beledweyne’Buulo burte iyo Halgan oo ka wada tirsan gobalka Hiiraan.
Qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan degmada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tiro madaafiic ah ay ku dhaceen difaacyada ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya walow si rasmi ah aan loo xaqiijin khasaraha ka dhashay madaafiicda maadaama Xabashida Itoobiya aysan ogoleen in difaacyadeeda dadka shacabka kasoo agdhawaadaan.
Dhawaan ayeey aheed markii inka badan 60 askari Xabashida Itoobiya looga dilay dagaal culus oo ka dhacay degmada Halgan ee gobalka Hiiraan.
Previous: Faahfaahino Laga Helayo Madaafiic Iyo Weeraro Toos Ah Oo Muqdisho Ka Dhacay.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 10-09-1437 Hijri.